Fifidianana Venezoeliana: Nandresy Tamin’ny Isa Tery dia Tery Ny “Chavism” (mpanara-dia an’i Chávez) · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 16 Avrily 2013 22:34 GMT
Vakio amin'ny teny English, 日本語, বাংলা, Italiano, Español
Taorian'ny efa ho ora 5 mahery, nanambara [es] ny voka-pifidianana izay ho filoham-pirenena ao Venezoela ny CNE (Filankevi-Pirenena momba ny Fifidianana). Ny mpirotsaka Nicolás Maduro, notendren'i Hugo Chávez ho mpandimby azy, no nandresy tamin'ny isam-bato 50.66%. vato 230.000 monja no nanasaraka azy tamin'ilay mpifanandrina aminy Henrique Capriles Radonski, izay nahazo vato iray tapitrisa amboniny raha miohatra amin'ny fifidianana natao tamin'ny Oktobra lasa teo izay naharesy azy nanoloana an'i Chávez.
Mbola tsy ampy ny 1% amin'ny vato rehetra io fanisàna io, ahitàna ny vaton'ireo tao Venezoela sy ny vokatra rehetra tany ivelany rehefa atambatra – izay manakaiky ny 60.000 olona eo ho eo. Io no hanentsina ny elanelana eo amin'i Maduro sy Capriles.
Na dia tsy “hitsimbadika” amin'ny fomba ofisialy intsony aza ny vokatra, nilaza [es] ny tariky ny mpanohitra fa tsy hankato io vokatra io mandra-pamerina manisa indray ny voka-pifidianana. Mitaky ny CNE ihany koa izy ireo mba hiverina hijery ny fitarainan'ireo olona 3 arivo mikasika ny tsy fanjariana tamin'ny fifidianana izay tsy nasiana valiny akory, ahitàna heloka bevava ara-pifidianana nanomezana tombony ny governemanta ny sasany amin'izy ireny.
Caracas, Venezoela. 14 Aprily 2013. Sary an'i Harold Escalona, fizakàmanana Demotix
Tanatin'ny kabariny fampielezankevitra, nilaza i Nicolás Maduro fa nahefa ny adidiny izy tamin'ny naha-mpandova ny filoha Chávez azy, izay nodimandry tamin'ny Martsa. Nampangainy ihany koa i Capriles ho nanolotra fifanarahana iray taminy mikasika ny fananganana governemanta. Etsy andaniny, nanadio ny tenany i Capriles nilaza fa tsy hiray tsikombakomba amin'ny “hosoka sy ny kolikoly”. Nitaky koa izy ny hanajàna ireo mpifidy niisa 49% nanohana ny fotokeviny.
Azonao atao ny mamaky ireo fanehoankevita sy tatitry ny olon-tsotra ao amin'ny Twitter amin'ny fampidirana ny tenifototra #EleccionesVenezuela [es], #Venezuela, #Venezuelasomostodos [es] (“Venezoela daholo izahay”) sy #Maduro ankoatry ny hafa.
Mbola vao ny fanombohan-draharaha ihany izao.